” EBOLA (သို့) သေမင်းဗိုင်းရပ် “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Facebook » ” EBOLA (သို့) သေမင်းဗိုင်းရပ် “
Posted by ခင်ခ on Aug 1, 2014 in Facebook, Health & Fitness | 10 comments
ရုပ်ရှင်တွေထဲက ရောဂါတွေ ဂယ်ဖြစ်လာပြီ လားမသိဘူးး
There wasamovie which is called “Outbreak” about Ebola in 1995.
Actor was Dustin Hoffman and was very famous one based on real story.
That virus might become stronger.
Hope we already have many research things on it to get recover well.
The film focuses on an outbreak ofafictional Ebola-like virus called Motaba in Zaire and later inasmall town in the United States. Its primary settings are government disease control centers USAMRIID and the CDC, and the fictional town of Cedar Creek, California. Outbreak’s plot speculates how far military and civilian agencies might go to contain the spread ofadeadly contagion.
The film was released on March 10, 1995 and provedabox office success, spending three weeks at the top of the domestic box office. The film was nominated for various awards but failed to garner any major award nominations. It also raised various “what-if” scenarios: media outlets began to question what the government would really do inasimilar situation and if the CDC has plans in case an outbreak ever does occur. A real-life outbreak of the Ebola virus occurred in Zaire onlyafew months after the film was released.
အဲဒီ Outbreak ကို ကြည့်ပြီး ကြောက်ခဲ့ရတာ ပေါ့ အရီးရဲ့။
ဒပ်စတင်ရဲ့ စိတ်ရှုပ်တဲ့ မက်နှာပေးကြီးကို ပြေးမြင်လာပြီ။
နောက်ပြီး ရင် ဇွန်ဘီဖြစ်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေ….
the Happening ထဲကလို လေကနေကူးတဲ့ ရောဂါပိုးတွေ လာတော့မှာလားမသိဘူးးး
စိတ်ညစ်စရာပဲ။ တခုပြီးတခု။ တော်သေးတာက လေထဲကမကူးဘူးဆိုတာပဲ။
နောင်မှာ.. ရှောင်လို့ ကို..မရတဲ့… ပိုးတွေ…လာဦးမှာ…
၀ါရှင်တန်- အနောက်အာဖရိကတွင် အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်အကြီးကျယ် ဆုံး ပျံ့နှံ့နေသောကြောင့် ယင်းရောဂါပိုး နိုင်ငံတကာသို့ ပျံ့နှံလာနိုင်သည် ဆိုသော စိုးရိမ်မှုများ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် ချွဲ၊ သလိပ်၊ နှပ်၊ နှာရည်၊ သုက်၊ တွံတွေး၊ သွားရည်၊ ချွေး၊ အန်ဖတ်၊ မစင် (သို့မဟုတ်) သွေးမှတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်သည်။ အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ အများစုမှာ ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရသည့် ရောဂါလက္ခဏာပြနေသူများကို ပြုစုပေးသူ၊ ၎င်းတို့နှင့်အတူ နေထိုင်သူများဖြစ်ကြောင်း မွန်ရိုးကပြောသည်။ ရောဂါပြန်ကောင်းလာသူများထံမှ ၎င်းတို့၏ သုက်ပိုးမှတစ်ဆင့် ပြန်ကောင်းပြီး သီတင်းခုနစ်ပတ်အထိ အခြားလူတစ်ဦးသို့ ကူးစက်နိုင်သေးကြောင်း WHO က သတိပေးထားသည်။
အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူများ၏ အလောင်းကို မထိမိပါစေနှင့်။ ယင်းရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူများ၏ အသုဘအတွက် ပြင်ဆင်ပေးစဉ် (သို့မဟုတ်) မြှုပ်နှံစဉ်တွင် ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်သည်။ အီဘိုလာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူများကို သေချာစွာ လုံခြုံစွာမြှုပ်နှံသင့်ကြောင်း WHO က အကြံပေးထားသည်။
အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့နေသည့် ဒေသမှ လူနာများနှင့် ရောဂါ လက္ခဏာပြနေသူများကို လူအများနှင့် သီးခြားထားသင့်သည်ဟု CDC က ပြောသည်။ ကျန်းမာရေးလုပ်သားများအနေဖြင့် ရောဂါကူးစက်မှုကို ကြိုတင်ကာကွယ်ထားသင့်သည်။ မျက်နှာဖုံး၊ လက်အိတ်၊လက်ရှည် ၀တ်စုံတို့ ၀တ်ထားပြီးမှ လူနာများကို ကုသပေးသင့်သည်။ အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသည့်အချိန်မှ ရောဂါလက္ခဏာပြသည့် အချိန်အထိ အချိန် ၂၁ ရက်ကြာကြောင်း သိရသည်။
အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသည့် တိရစ္ဆာန်များ၏ သွေး၊ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများ (သို့မဟုတ်) ၎င်းတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်သော အရည်များနှင့်အနီးကပ်ထိတွေ့ပြီးနောက် လူများရောဂါ ကူးစက်ခံရသည်။ အသီးစားလင်းနို့များမှာ အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ် သဘာဝ လက်ခံကောင်များ ဖြစ်သည်။
.မတော်တဆ အဲဒီရောဂါ ဒီနိုင်ငံထဲရောက်ရင် မတွေးဝံ့စရာပါ..
.ရောဂါဖြစ်သူကို မနီးစပ်ချင်လို့ အလုပ်က ထွက်သွားမယ့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလဲ နည်းမှာမဟုတ်..
.ဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့ နေထိုင်သွားလာလုပ်ကိုင်ပုံစံနစ်ကလဲ အတော်ကြီး လုံးလုံးထွေးထွေး ဖြစ်နေတာ..
.တစ်ခုခုဖြစ်လို့လဲ ဆေးရုံဆေးခန်း ချက်ချင်းသွားလေ့ရှိတာမဟုတ်…
.ကျုပ် ကတော့ သူတပါးနဲ့ အသားချင်းထိဖို့ အခွင့်အလမ်း တော်တော်နည်းပါတယ်..။
.ဘတ်စကားပေါ်ကဆင်းရင် စပယ်ယာက တွန်းချ ဆွဲချ နေကျ ဆိုတော့..
.ကူးရင်းကူးရင် အဲသည်စပယ်ယာတွေဆီကပဲ ကူးဖို့များတယ်….
အတော် ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ ဗိုင်းရပ်ပါလား …
ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်ထဲ မဝင်အောင် ဆိုရင်တော့
ရှေ့ပေါက်၊ နောက်ပေါက် အကုန်လုံးမှာထားပြီး စစ်ဆေးသင့်တယ် …
ဒီဗိုင်းရပ်က ဘယ်လို ဝင်ဝင် … ဝင်လာရင် သေပြီဆရာပဲ …
ရောဂါ ကူးစက်ခံနေရသူတွေနဲ့ အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအတွက်တော့
အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ ဒီဗိုင်းရပ်ကို ဖြေရှင်းသွားနိုင်ပါစေလို့ပဲ ဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျို့ …
အမေရိက ကတော့ အဲဒီ မှာ ရောဂါ ကူးလာတဲ့ သူတို့ အမေရိကန်လူမျိုး ဆရာဝန် နဲ့ သူနာပြု ကို နိုင်ငံထဲပြန် ခေါ်ပြီး ဆေးကု နေပြီ။
အဲဒီ ဆေးရုံ က လူတွေ ကတော့ ကြောက်နေပေမဲ့ လက်ခံ ပြီး နေရဲ ကြတယ်။
အရမ်းရှားတဲ့ ဆေး တစ်လုံး ကို ဆရာဝန် က သူနာပြု ကိုပေးလိုက်ဖို့ ပြောလိုက်တယ်။
ဒီ ဆရာဝန် ရဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်း မဆန်မှု ၊နိုင်ငံ ရဲ့ ကိုယ့် လူမျိုး ကို စောင့်ရှောက် တတ်တဲ့ သစ္စာရှိမှု တွေ က တကယ်ဘဲ အားကျစရာပါဘဲ။
ပြောချင်တာ တွေ များပေမဲ့ နောက်သတင်း ရှိသေးလို့ နောက်မှ။
Post ခေါင်းစဉ် မဟုတ်ပေမဲ့ ပြောချင်လွန်းလို့ ဒီမှာ ရေးတော့မယ်။
နောက်တစ်ပုဒ် ကတော့ အဘဖော တို့ အော်ဇီ နဲ့ နွယ် တဲ့ ဇာတ်လမ်း။
အော်ဇီ က လင်မယား နှစ်ယောက် က ထိုင်း က မိန်းမ တစ်ယောက် ကို အငှားကိုယ်ဝန် ဆောင် ခိုင်း ခဲ့တယ်။
အမွှာလေး ဖြစ်ပြီး နောက် ကိုယ်ဝန်ရင့် လာတော့ ကလေး တစ်ယောက်မှာ ဒေါင်းဆန်ဒရုံး ရောဂါ ပါလာတာ သိလိုက်တယ်။
ဒီတော့ ဟိုဘက် မိဘ က အဲဒီရောဂါဖြစ်နေတဲ့ ကလေး ကို ဖျက်ဖို့ ပြောပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားသူက ဗုဒ္ဓဘာသာမို့ မဖျက်ဘူး ငြင်းခဲ့တယ်။
ကလေးတွေလဲ မွေးပြီးရော ဟိုဘက် မိဘ က ကောင်းတဲ့ ကလေး ကိုဘဲ ယူပြီး ရောဂါသည်ကလေး ကို ချန်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါကို ထိုင်း အမေ က တော့ အဲဒီ လူဖြူ ရောဂါသည်လေး ကို သူ ကျေကျေနပ်နပ် မွေးပါမယ် လို့ ပြောလိုက်တယ်။
သူခမျာ ရောဂါသည်လေးမို့ ပညာလဲ တတ်ချင်မှတတ်မယ်။ တော်ချင်မှလဲ တော်မယ်။ သူကတော့ လူကောင်းလေးဖြစ်အောင်တော့ ကြိုးစားမွေး မယ်လို့ လဲ ပြောလိုက်သတဲ့။
ဒါကို ထိုင်း သတင်းစာ တွေ က စပြီး ဖွ လိုက်တော့ အော်ဇီ အထိပါပြန့်သွားပြီး လူ တွေ စုပြီး ရံပုံငွေ ကောက်လိုက်တာ ဒေါ်လာ တစ်သိန်း ကျော် ရနေပြီ။
ဒါပေမဲ့ ဒီ ၆လ ကလေး လေး ရဲ့ နှလုံး ကလဲ ဆိုးလာတော့ ဆေးရုံမှာ ရောက်နေတယ်။
ဒီ ဇာတ်လမ်း မှာတော့ နှစ် ဘက် အမြင် ကြည့်ပြီး ဘယ်သူအမှန် အမှား ပြောရခက်ပါတယ်။
အားလုံး က “ကံ” အတိုင်း ဖြစ်နေရတာ မြင်ရတာမို့ မဝေဖန် ရက် တော့ ပါဘူး။
ဒီနေ့ ဇာတ်လမ်း လေးတွေ ကတော့ ဒါပါကွယ်။ :-)))